Cabashada milateriga Soomaaliya ee Ceel-waaq ay ka qabaan sarkaal Kenyan ah oo korortay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada milateriga Soomaaliya ee degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo ayaa ka cabanaya faragelin uu shaqadooda ku hayo sarkaal ka tirsan milateriga Kenya, oo kasoo jeeda gobolka Woqooyi Bari Kenya ee Soomaalidu degto.
Sarkaal lagu magacaabo Col. Aadan Jeele Faarax oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya ee ku sugan Ceelwaaq, ayaa shaaciyay in sarkaal Kenya u dhashay maroorsaday awoodda ciidanka iyo maamulida guutooyinka halkaasi ku sugan.
Col. Jeelle ayaa tilmaamay in haatan khilaaf cakirani kala dhex yaalo. sarkaalkaas iyo saraakiisha Soomaalida ah, isagoo xusay inaan sarkaalkaasi ka tirsanayn ciidamada AMISOM, balse uu yahay nin amarada ka qaata ciidanka Kenya ee gudaha Kenya.
Sarkaalka ka tirsan milateriga Soomaaliya ayaa sheegay in sarkaalk Kenyanka ah oo kala qayb qaybin ku hayo ciidamada Soomaaliya ee Ceelwaaq, sidoo kalana uu isagu magacaabayo guuto walba cidda hogaaminaysa.
“Ciidamada AMISOM, iskaashi guud baa naga dhexeeya laakiin, dawladda federalka ayaanu si toos ah u hoos tagnaa, waxaanu ku niri nama magacaabi kartid, mana na kala qaybin kartid, sharciga caalamiga ah iyo kan dawladdaha midna ma ogola in ciidamo dawladeed, dawlad kale ku soo xad gudubto” ayuu yiri Col. Jeelle oo la hadlay VOA.
“Ciidamo Kenya ah iyo saraakiil Kenya ah waanu la shaqaynaa oo kuwaasi waa AMISOM laakiin, ninkani wuxuu ka yimid gudaha Kenya, amaradiisuna waxay ka imanayaan gudaha Kenya” ayuu sidoo kale yiri sarkaalkaas.
Col. Jeelle wuxuu sheegay iney cabasho u gudbiyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka KMG ah ee Juba, ayna jawaab ka sugayaan.
“Xad gudubka ninkan ilaa dawladda federalka ah ayaanu u gudbinay, Jubbaland waanu u dirnay intaba jawaab baanu ka sugaynaa, jawaabtii oo aan na soo gaadhin ayuu nagu wadaa xadgudub iyo waxyaabo aan noo qalmin” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Sarkaalkan ayaa sheegay inay iska dhicinayaan sarkaalka Kenyanka ah hadii uu joojin waayo kala qeybinta ku dhisan qaab beeleedka ee uu ku hayo ciidamada Soomaaliya ee Ceel-waaq “Wallaahi haddii uu xad gudub dambe noola yimaado waxaa noo qorshaysan inaanu iska dhicino”.
Ciidamadan ka cabanaya sarkaalka Kenyanka ah ayaa markii hore lagu soo tababaray gudaha Kenya, waxayna ahaayeen labo guuto oo mid ka mid ah ka howlgasho Ceelwaaq, tan kalana ka howlgasho Dhoobley.
Dalalka deriska la ah Soomaaliya ee soo tababara ciidamada dowladda ayaa lagu eedeeyaa iney danahooda gaarka ah u adeegsadaan ciidamada ay dalalkooda ku soo tababaraan, haddii ay dan ka waayaana ay kala daadiyaan.
Alshabaab oo xalay saacado gacanta ku hayey degmada Wanlaweyn